Maydka Jamaal Khashoggi oo aan weli la hayn laakiin loo malaynayo in lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul – Radio Daljir
Maydka Jamaal Khashoggi oo aan weli la hayn laakiin loo malaynayo in lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul
Oktoobar 7, 2018 4:23 g 0
Wararkii ugu danbeeyey ee baadigoobka Jamaal Khashoggi oo ay ugu war danbaysay Talaado 1:00 PM saacadda Istanbuul, 2 Oct 2018, markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbuul uuna ka doontay dukmentiyo u gaar ah ayaa sheegaya in loo malaynayo in lagu dhex dilay isla qunsilayadda. Weli lama helin meydka Jamaal Khashoggi.
Madaxweyne Erdogan oo daqiiqo kahor arrinkaan ka hadlay ayaa yiri, “weli waxaan ku rajo weynahay in la helo.” Madaxweyne Erdogan oo hadalkiisa sii wata ayaa ku daray, “waxaan adduunka u sheegayaa in aan arrinkaas ku hawlanahay, wax kasta iyo natiijo kasta oo ka soo baxdana aan idiin sheegi doono.”
Sirdoonka Turkiga ayaa sheegay in wafti ka kooban 15 nin oo Sacuudi ah ay isla maalinka uu Jamaal galayo qunsuliyadda ay ayana 2 diyaaradood oo khaas ah Istanbuul ku yimaadeen, ayna galeen isla qunsuliyadda Sucuudiga, isla maalinkiina ku noqdeen Sucuudiga.
Warar badan oo la isla dhexmarayo baraha Twitterka ayaa sheegaya in Jamaal la jirdilay, la dilay, deedna meydiisana la jarjaray oo boorsooyin lagu qaatay. Wararkaas ma aha kuwo sugan, waxaana si dadban ugu jawaabay Madaxweyne Erdogan asaga oo yiri, “wax kasta iyo natiijo kasta oo ka soo baxda baaritaanka aan wadno waan idiin sheegi doonaa.”
Sidii maalinkii Talaadada ee afar beri kahor uu Jamaal u galay qunsuliyadda Sucuudiga weli kama uu soo bixin. Sucuudiga ayaa ku jawaabay in Jamaal uusan marnaba soo galin qunsuliyadda, waxayna dadka qaarkiis u oggolaadeen in ay ka baaraan xafiisyada iyo qolalka korontada iyo kuwa kaydka. Midkoodna lagama helin Jamaal iyo meydkiisa toona.
Xaaska Jamaal Khashoggi way la socotay maalinka uu Jamaal galay qunsuliyadda, asaga oo cabsi weyn ka qaba in uusan soo noqon doonina waxa uu taleefoonkiisa uga tagay xaaskiisa, una sheegay in ay wacdo wasiir dowladda Turkiga ka tirsan haddii uusan waqti cayiman kaga soo bixin qunsuliyadda.
Sidii uu Amiir Maxamed bin Salmaan uu xukunka Sucuudiga ula wareegay, siyasaadda Sucuudiga ayaa noqotay mid jaahwareer iyo duullaan dalalka dariska siiba Yemen weli ka bixi la’.
Hoos ka daawo muuqaal ay TRT World ka diyaarisay siyasadda murugsan ee MBS illaa iyo maalinkii uu xukunka la wareegay.
Saudi journalist Jamal Khashoggi went into the the Saudi consulate in Istanbul, but he never came out. He was a long-time critic of Crown Prince Mohammad bin Salman’s policies. Here’s a look as what MBS has been up to since taking power pic.twitter.com/VjeUlRGfxJ
Siyaasadda & Dhaqaalaha 495 Somalia News & Reports in English 274 Wararka 24418
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Wasiirka Ingiriiska Ee Arrimaha Afrika (Sawiro)
Bosaaso oo lagu qabtay shir ku saabsan aaya-ka-tashiga daljoogta Puntland (dhegayso/sawirro)